WAR CUSUB: Xaalada Maanta Kismaayo & Shirqoolkii Axmed Madoobe Dhigtay Oo Hir galay — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA WAR CUSUB: Xaalada Maanta Kismaayo & Shirqoolkii Axmed Madoobe Dhigtay Oo Hir...
WAR CUSUB: Xaalada Maanta Kismaayo & Shirqoolkii Axmed Madoobe Dhigtay Oo Hir galay
Dawlad Gobolleedka Jubbaland ayaa bilowday shirqool ay ku qab qabaneyso Ashqaasta kasoo horjeeda,taas oo lagu go’aamiyey Shirkii Khamiistii ka dhacay Kismaayo.
Wararka ugu dambeeya Ee ka imaanaya Magaaladaasi ayaa sheegaya in maanta la dareemayo ciidamo feejigan,kuwaas oo dhaqan gelinaya ka hortegida cid kasta oo ka hor timaada Nidaamka Axmed Madoobe.
Waxa lasoo sheegayaa inay dadka Isbadel doonka Jubbaland taageersanaa qaarkood la war geliyey inay joojiyaan oo dad ku heyb ah loo diray islamarkaana looga digay inay ku lug yeeshaan mucaaradnimo dambe.
Dawlad Gobolleedka Jubbaland ayaa waxay mamnuucday in shir dambe oo Mucaaradka Axmed Madoobe ay ku qabsan doonaan Kismaayo,taas oo ah shirqool la rabo in lagu xalaaleysto soo qabashada Seeraar iyo C/rashiid Xiddig sida ay Isbadel doonka qaar ufasirteen warkaasi amarka soo baxay.
Balse Xiddig oo weli heysta Xasaanada Xildhibaanimada Qaranka ayaa waxa uu hore usheegtay 22-kii Bishii Augusto inuu yahay Madaxweynaha Sharciga Jubbaland sidaa si la mid ahna uu isna Madaxweyen sheegtay C/naasir Seeraar Maax.
Saraakiisha Nabad sugida iyo Kuwa Booliska ayaa la siiyey amarkii ugu dambeeyey ay kusoo xiri karaan cid walbo oo lagu soo qabto iyagoo shir ku qabanaya Magaalada Kismaayo.
Xaalka ayaa hadda u muuqda mid sii cakirmaya,xilli Khamiista la filayo inuu Axmed Madoobe Caleemo saar ku qabsado Magaalada Kismaayo oo wufuud kala duwana marti qaad usameeyey.
Previous articleKenya oo soo iib satey Diyaarado dagaal kuna wajahan Soomaliya
Next articleWAR CUSUB: Hub ka degay meel kamid ah Xeebaha Puntland & Ciidamo labo dhinac ah oo la geeyey Cabsi xoogan oo…
DEG DEG:-Qarax Xoogan oo goordhow ka dhacay magalada Muqdisho sababeyna khasaare...
WARAR:Dhaqdhaqaaq dagaal oo ka jira kismaayo & Wararkii u...